Bashannana - BBC News Afaan Oromoo
Tilmaama Pirimiyeer Liigiin Laawuroon Liivarpuuliifi Yunaayitid qixa bahu jedhe
Xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Ispoortii Maark Laawuransan Maanchistar Liivarpul morkate qabxii hirata jechuun tilmaame. Taphoota kaaniif dubbisaa.
Taphoota dhuma torbee darebeetiin eenyufaatu dandeettii cimaa mullise?
Tilmaama Pirimiyeer Liigii: Eenyuti eenyuun mo'ata?
Akkuma yeroo kaanii ogeessi kubbaa miilaa Maark Laawuroosan taphoota Piriimer Liigii Ingilizii torban kanaa eenyu eenyuun meeqaan akka mo'atu tilmaama isaa kenneera. Isin kan keessan akkamiin tilmaamtu?
Pirimiyer Liigii: Taphattoota ciccimoo 11 torbee kanaa
Taphoota Pirimiyer liigii Ingiliiz torbe kanaa irratti taphattoonni ciccimoo milkaa'ina garee isaaniif gumaachan eenyu fa'i?
Mohaammad Saalaa, Mohaammad Saalaan yoo wal-argu
Taphataa Liivarpuul kan ta'e Mohaammad Saalaah wal fakkaattii isaan adda baasuuf hedduu nama rakkisa
Warreen sadarkaa irratti murteessoo ta'an dabalatee taphoonni PL torbee kanaa qbxii akkamii qabaachuu malu kan jedhu Laawuroon tilmaameera.
Weellisaan beekamaa Daayimandi Pilaatinamzi viidiyoo maxxanseen rakkoo keessa galee jira
Weellisaan beekamaa Daayimandi Pilaatinamzi viidiyoo dhungoo qabu maxxansuu isaatiin rakkoo keessa galee jira
Hundeessaan 'Toys R U's Chaarliis Laazaarus wayita kubaaniyaansaa cufamaa jirutti boqotan
Kubaaniyaan horgoggee bara 1948 keessa Chaarliis Lazaarusiin hundeefame kun torban darbe keessa suuqiiwwan isaa Ameerikaafi Inglizii jiran akka cufan beeksiise ture.
Filannoo garee cimaa Gaarz torbee kanaa keessa: Saalaah, Eriksan, Lukaakuu fi Maatich keessatti argamu
Eenyuufaatu irra caalaatti na dinqisiise. Gareen cimaa torbee kanaa an filadhe kunoo... isinis kan keessan filachuu dandeessu.
Xiinxalaan kubbaa miilaa Laawuroon taphoota torbee kanatti PL fi FA CUP irratti taasifaman akkasiin qabxiisaanii tilmaameera.
Garee cimaa Piriimiyeer Liigii torbee kanaa: Gaarzi Kiruuksiin
Garee cimaa torbee kanaa keessatti Raashifoordi, Vaardii, Baarnes, Wiiliyaan, Kenedii, Mahaareez fi Yaangi filatamaniiru
Taphoota Piriimiyeer Liigii Ingiliizii torbee kanaatiin taphattoonni sochii gaarii taasisan filannoo garee cimaa Gaarzi Kiruuksi keessa seenaniiru
Piriimiyeer Liigiin Ingiliiz dhuma torbee kanaatti yoo itti fufu kilaboonni taphattoota haaraa qabatanii dhufan maal agarsiisu kan jedhu eegamaa jira.
Garee Cimaa torbee kanaa keessa Oozil, Aguweeroo fi Mahaareez galaniiru
Taphoota Piriimiyeer Liigii torbee kanaatiin taphattoonni sochii gaarii taasisan filannoo garee cimaa Gaarzi Kiruuksi keessa seenaniiru
Maanee, Firmiinoo, San, Aarnaatooviich, fi Laanziiniin filatamaniiru
Taphoota Piriimiyeer Liigii torbee kanatti taasifamaniin taphattoonni sochii cimaa agarsiisan filannoo garee cimaa Gaarzi Kiruuks keessa seenanii jiru
Tilmaama Pirimiyeer Liigii tibba ayyaanaa, Laawuroo irraa
Pirimiyeer Liigii Ingiliizii torbee kanattis yoo itti fufan, Liivarpuul Leestar waliin, Yunaayitid fi Saawuzihaampitan, Arseenaal Weest Biroom waliin akasumas Siitiin Paalaas waliin taphoonni taasisan kan eegamani dha.
Barri 2017 bara ulfaataa ta'us taateewwan gaggaariin yaadataman jiru
Barri 2017 bara guutummaatti jibbisiisaa hin turre. Taateewwan akka seeqnu nu dirqisiisan kunooti.
Tilmaama taphoota pirimiyeer liigii ayyaana barii taphataman
Xiinxalaan BBC Ispoortii Maark Laawuransan taphoota ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Iyyasuus Kiristoos booda taphataman akkanatti kaa'eera.